July Dream: Perseverance
Posted by JulyDream at 11:12 PM
ကိုဂျူလိုင်ရေ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားချင်းဖြင့် လိုရာပန်းတိုင်းကို ရောက်ရှိအောင်မြင်ပါစေဗျာ....
:D Success is achieved not by strength, but by perseverance. :P
Perserverance အင်း ဒီအရည်အချင်းကို Entrepreneur တွေရဲ့ မရှိမဖြစ်အရည်ချင်းတစ်ရပ်အဖြစ် သင်ကြားခဲ့ရဖူးတယ်
ဆုံးမစကား အားပေးစကားများအတွက် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . .
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းပေါ်ရောက်ရင်း လမ်းပျောက်နေမှာ စိုးလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ဆုံးမထားတာပါ။